Adeeg shubay - OUZHAN GANACSI (SHANGHAI) CO., LTD
Custom-shubay Service-OEM Shiinaha dhinta-ridaya Qaybo saaraha
Ouzhan waa hogaamiyaha adduunka ee saxda saxda loo tuurayo, wuxuu si gaar ah ugu takhasusay bixinta xirfadaha saxda ah ee dhimashada mudo tobanaan sano ah. In kasta oo xididdada Ouzhan ay ku jiifsadaan geeddi-socodkeenna shubista dhimashada badan ee iskudhafka ah haddana waxaan si isku mid ah ugu xoog badanahay soo saarista qaybo waaweyn iyadoo qaababka shubista ay u dhintaan qolladaha kulul iyo kuwa qabow.
Dareemida Die waa habsocodsi dhakhso leh, kharash-ool ah habka wax-soo-saarka wax-soo-saarka ee soo-saarista mug weyn, qaab-qaabeysan, qaybo bir ah oo dulqaad leh. Sida caadiga ah, qaybaha ridaya dhinta waa la soo ururin karaa oo la marin karaa iyada oo aan la sii jeesan, iyo qaybo dun leh ayaa sidoo kale si toos ah loo tuuri karaa. Caaryadu waxay leedahay nolol dheer, iyo qaabka loo shubay dhimashadu waxay caadi ahaan soo saari kartaa tiro kasta oo ka kooban, laga bilaabo boqollaal kun ilaa milyan.
Laga soo bilaabo qaybo yar yar sida qaybaha guud ee kamaradaha, qaybaha makiinadaha wax lagu qoro, qalabka xisaabinta elektarooniga ah iyo qurxinta, iyo waliba qaybaha adag ee gawaarida sida gawaarida, tareenada, iyo diyaaradaha, intabadan waxaa lagu farsameeyaa dhinta tuurista.
Ouzhan Qiyaasta Dhimashada Awoodaha iyo Astaamaha:
- Soo-saar tiro badan oo wax-ku-ool ah
- Isdhexgalka qayb ahaaneed wuxuu baabi'iyaa howlaha
- Awoodda soo saarista qaabab isku dhafan
- Deggan tayo sare leh soosaarka tirada
- Dulqaadka adag ee ridaya dhinta
- Nolosha dheer ee wasakhda
Maxaad u Dooratay Ouzhan Adeegyada Daarista Dhimashada
1. Markii aan ka helno weydiin macmiilka, waxaan sameyn doonaa qiimeyn hordhac ah si aan u eegno haddii aan wax soo saari karno. Hadday suurtagal tahay, iyo ka dib marka mashruuca la ansixiyo, waxaan soo diri doonaa oraahda.
2. Socodkeena adeegeena ee mashaariicda cusub
• Meelaha macaamiisha wasakhda iyo muunadaha ayaa la dalbadaa.
• Waxaan ku soo saarnaa PI 50% kharashka caaryada si aan u bixinno deebaajiga.
• U dir macaamiisha sawirada naqshadaha caaryada si loo ansixiyo.
• Bilaw soosaarka caaryada kadib helitaanka 50% dhigaalka.
• U dir shaybaarro iyo dokumentiyo kale sida shahaadada maaddada iyo warbixinta kormeerka si loo oggolaado.
• Soosaarid ballaaran kadib oggolaanshaha shaybaarka.
3. Xoog R & D Xoog
Waxaan haynaa 10 injineer oo ku sugan xarunteena R&D, dhamaantood waa dhakhaatiir ama macalimiin ka socda Jaamacada Sayniska iyo Teknolojiyadda Shiinaha. Waxaan ku soo bandhigi karnaa inta badan xirfadleyda adeegsiga qaabka naqshadeynta caaryada.
4. Xakamaynta Tayada adag (ISO 9001: 2008)
Waxaan leenahay shaqaale kormeer tayo leh iyo qalab, sida ku cad heerarka caalamiga ah ee alaabadaada si loo tijaabiyo, loona soo saaro warbixin tijaabo ah oo faahfaahsan oo loogu talagalay qaybaha macaamiisha 'CNC machining'.
5. OEM & ODM La Aqbali Karo
Cabirro iyo qaabab loo qaabeeyey ayaa la heli karaa. Ku soo dhowow inaad nala wadaagto sawiradaada 2D ama 3D ee qaybahaaga mashiinada CNC, nala wada shaqee si aan nolol uga dhigno mid hal abuur leh.
Muxuu Yahay Adeegga Daarista Dhimashada & Sida ay u shaqeyso Dajinta Dhimashada
Dajinta Die waxaa sidoo kale loo yaqaan 'cast cast cast'. Waa qaab shubitaan kaas oo dareeraha daawaha ah ee la shubay lagu shubo qolka saxaafadda, daloolka caaryada birta ah waxaa lagu buuxiyaa xawaare sare, dareeraha daawaha ahna waa la xoojiyaa cadaadiska si loo sameeyo shub. Astaamaha ugu muhiimsan ee tuurista dhinta ee ka geddisan hababka kale ee loo rido waa cadaadis sarreeya iyo xawaare sare.
Metal Birta la shubay waxay buuxisaa daloolka godka cadaadiska, waxayna kala dhigtaa oo xoojiso cadaadiska sare, cadaadiska guud waa 15-100MPa.
Metal Birta la shubay ayaa daloolka ka buuxinaysa xawaare sare, badiyaa 10-50 mitir ilbiriqsi, qaarna waxay ka badnaan karaan 80 mitir ilbiriqsikiiba (xawaaraha toosan ee godka ee marinka laga galo albaabka gudaha-xawaaraha albaabka gudaha), sidaa darteed birta dhalaashay Waqtiga buuxintu aad ayuu u gaaban yahay, godka ayaa lagu buuxin karaa qiyaastii 0.01-0.2 ilbidhiqsi (waxay kuxirantahay cabirka tuubada).
Faa'iidooyinka loo shubay dhinta waxaa ka mid ah saxsanaanta cabbir aad u fiican ee ridaya. Caadi ahaan tani waxay kuxirantahay walxaha shubka. Qiimaha caadiga ah waa 0.1 mm cabirka hore ee 2.5 cm, iyo 0.002 mm midkiiba oo dheeri ah oo dheeri ah. Marka loo barbardhigo hababka kale ee loo shubay, dusha sare ee loo shubay waa mid siman, isla markaana radius guluubku wuxuu qiyaastii gaarayaa 1-2.5 micron. Marka loo barbardhigo sanduuqa ciidda ama qaababka shubista caaryada joogtada ah, shubmo leh dhumucdiis oo derbi ah oo qiyaastii ah 0.75 mm ayaa la soo saari karaa. Waxay si toos ah u tuuri kartaa qaabdhismeedka gudaha, sida gacmaha siligga, aaladaha kululaynta, iyo dusha sare ee dhalista xoogga leh. Faa'iidooyinka kale waxaa ka mid ah awoodda ay u leedahay inay yareyso ama ka fogaato mashiinnada labaad, xawaaraha wax soo saarka degdegga ah, xoog u qaadista foorarka illaa 415 MPa, iyo shubista birta dareeraha sare leh.
Qalabka loo shubay dhinta - Qalabka loo isticmaalo Dhimashada Dhimashada
Biraha loo isticmaalo tuurista dhinta inta badan waxaa ka mid ah zinc, copper, aluminium, magnesium, lead, tin, iyo macdanta "lead-tin". In kasta oo birta-dhinta ay dhif tahay, haddana waa macquul. Maaddooyin gaar ah oo loo yaqaan 'die-casting metal' waxaa ka mid ah ZAMAK, aluminium-zinc alloys iyo heerarka Ururka Aluminium ee Mareykanka: AA380, AA384, AA386, AA390 iyo AZ91D magnesium. Astaamaha biraha kaladuwan waa sida soo socota:
• Zinc: Birta ugu fududahay in loo dhinto, waa dhaqaale ahaan soosaarka qaybo yar yar, fududahay in la daboolo, xoog cadaadis badan, caag sare, iyo nolol waqti dheer loo rido.
• Aluminium: Fudud, soosaarid isku dhaf ah iyo tuuryo khafiif ah ayaa leh xasillooni cabbirkeedu sarreeyo, caabbinta daxalka oo xoog badan, astaamo farsamo oo wanaagsan, kuleyl iyo hawo koronto oo sareysa, iyo xoog sare heerkulka sare.
• Magnesium: waa fududahay in la farsameeyo, saamiga sare ee culeyska-culeyska, kan ugu fudud ee biraha dhinta ee inta badan la isticmaalo.
• Naxaas: Qalbi adayg sare, caabbinta daxalka oo xoog badan, astaamaha farsamo ee ugu wanaagsan ee birta inta badan loo adeegsado dhimashadu, xirashada caabbinta, iyo xoogga ku dhow birta.
• Laydhka iyo daasadda: cufnaanta sare, saxnaanta cabbirka sare, waxaa loo isticmaali karaa inay tahay qaybo gaar ah oo ka hortagga daxalka. Tixgelinta caafimaadka bulshada, isku-darka looma isticmaali karo qalab cunto iyo keydinta. Daawaha sunta rasaasta, daasadda iyo antimoniga (mararka qaarkoodna ay ku jirto xoogaa naxaas ah) ayaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo nooca gacanta lagu sameeyo iyo in lagu nadiifiyo daabacaadda waraaqaha.
Xadka sare ee xaddiga tuurista ee loo adeegsado aluminium, naxaas, magnesium iyo zinc waa 70 lb (32 kg), 10 lb (4.5 kg), 44 lb (20 kg) iyo 75 lb (34 kg) siday u kala horreeyaan.
Adeegyada Kale ee Daarista ee La Heli Karo
Shubay Die waa uun mid ka mid ah geedi socodka shubay badan. Maaddaama ay tahay warshad farsameynta mashiinnada kor u dhaafta, OuZhan sidoo kale waxay leedahay noocyo kala duwan oo kheyraad warshad kale oo loo shubi karo. Waxaan ku siin karnaa macaamiisha adeeg kasta oo shub ah:
Habka loo shubay caaryada 1.Sand
Adoo adeegsanaya ciid ahaan wax caaryadu ka samaysan tahay, ciida leh halabuur kala duwan ayaa loo qaybin karaa shubista caaryada cagaaran, dusha caaryada oo qallalan dusha, iwm, laakiin ciidda oo dhan looma isticmaali karo tuurista. Faa'iidada ayaa ah in qiimaha uu hooseeyo maxaa yeelay ciidda loo adeegsaday caaryada dib ayaa loo isticmaali karaa; Faa’iido darrada jirta ayaa ah in soo saarista caaryadu ay waqti qaadanayso, caaryada lafteeda dib looma isticmaali karo, sheyga dhammeeyayna waxaa la heli karaa oo keliya marka la burburiyo ka dib.
2. Habka loo shubay caaryada birta ah
U isticmaal bir leh baraf ka sii sarreeya alaabta ceeriin ah si aad u sameyso caaryo. Kuwaas waxaa loo qaybiyaa habka loo tuuro cuf isjiidadka, habka tuurista cadaadiska hoose iyo habka tuurista cadaadiska sare. Iyada oo ku xiran barta dhalaalka ee caaryada, birta la tuuri karo ayaa iyaduna xadidan.
3. Habka wax lumay
Qaabkani wuxuu noqon karaa habka filinka banaanka loo tuuro iyo habka loo rido adag. Habkani wuxuu leeyahay saxsanaansho wanaagsan waxaana loo isticmaali karaa in lagu rido biraha dhibcaha sare (sida titanium). Si kastaba ha noqotee, qiimaha sare ee dhoobada, iyo baahida loo qabo kuleyl badan iyo wax soo saar adag, qiimaha waa qaali.
Codsiyada Adeegyada Casting Die iyo Qaybo
Madax & biibiile
Ouzhan Dhimashada Dusha Sare Dhimashada
Halkan waxaa ku yaal xulasho ballaaran oo ah adeegyo dhammaystiran dusha sare ee biraha aad dooratay oo loogu talagalay qaybaha mashiinnada CNC ee la rogay si loo hagaajiyo muuqaalka qaybaha, dusha sare ee dusha sare, iska caabbinta daxalka, iyo astaamaha kale:
① Sida loo farsameeyay (heerka): ~ 125 RA µin (3.2 RA µm). Calaamadaha qalabka yar ayaa laga arki doonaa qaybta.
Mo Nadiif ah: Qaybaha waxaa lagu farsameeyaa sicir hoose si loo gaaro dusha sare ee ~ 62.5 RA µin (1.6 RA µm). Dhumucda dusha sare ayaa hoos loo dhigi karaa ilaa ~ 32 RA µin (0.8RAµm) marka la codsado.
Ad Bead qarxiyay: Qaraxyada kuusha waxay ku darsataa dhar isku mid ah ama satin dusha sare oo ku saabsan qayb mashiin ah, kana qaadaysa dhammaan astaamaha qalabka. Badanaa waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin bilic leh
④ Anodized Clear or Color: Anodizing wuxuu ku darayaa dhuuban dhoobada dhuuban, adag, aan-tabinta lahayn ee dusha sare ee qaybaha aluminium, kordhinta xajmigooda iyo xirashada caabbinta. Waxaa lagu heli karaa midabbo kala duwan.
Co Maqaarka adag ee loo yaqaan 'Anodized Hardcoat': 'anodizing Hardcoat anodizing' waxay soo saartaa daahan dhoobada ka sii weyn oo bixiya daxalka iyo xirnaanshaha caabbinta. codsiyada shaqeynta.
⑥ Powder Coated: Dahaarka budada wuxuu ku darayaa lakab khafiif ah oo xoog leh, xirnaan iyo daxal u nugul rinjiga polymerka difaaca dusha sare ee qayb ka mid ah. Waxaa lagu heli karaa midabbo fara badan.
⑦ Electropolished: Electropolishing waa nidaam koronto ku shaqeeya oo loo isticmaalo in lagu nadiifiyo, lagu dhajiyo oo lagu nadiifiyo qaybaha biraha. Waa waxtar in la yareeyo culeyska dusha sare.
Ox oksaydh madoow: oksaydh madoow waa shay beddel ah oo loo isticmaalo hagaajinta caabbinta daxalka iyo yareynta milicsiga iftiinka.
Coating Dahaarka beddelka Chromate (Alodine / Chemfilm): Dahaarka beddelka Chromate waxaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo caabbinta daxalka ee aaladaha biraha iyadoo la ilaalinayo sifooyinka ay ku shaqeynayaan.
⑩ Cadayashada: Cadayashada waxaa lagu soo saaraa iyadoo birta lagu dhalaalayo xoqan taas oo keenta dhamaystirka satin aan loo jeedin.